Netflix ၏ Avatar - နောက်ဆုံးထုတ် Airbender ထုတ်ပြန်သည့်နေ့၊ ပုံ၊ နောက်တွဲနှင့်အခြားအရာများ - Netflix မူရင်း
Netflix ရဲ့ Avatar: နောက်ဆုံး Airbender ဖြန့်ချိသည့်ရက်, သွန်း, နောက်တွဲယာဉ်, အနှစ်ချုပ်နှင့်ပိုပြီး
နယူးယောက် - ဇွန် ၃၀ - ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ဇွန် ၃၀ ရက်၊ နယူးယောက်မြို့၊ အဲလစ် Tully ခန်းမ၌ The Last Airbender ဇာတ်ကား၏သရုပ်ဆောင်ပွဲတွင်သိုင်းပညာရှင်တစ် ဦး သရုပ်ဆောင်သည်။ (Stephen Lovekin / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
Fuller House ကအန်တီကီ၏နောက်ဆုံးဖြစ်ရပ်များကိုဆွေးနွေးပြောဆိုသည် ဇွန်လ ၂၀၀ တွင်ကြည့်ရှုရန် Netflix ရုပ်ရှင်နှင့်ပြပွဲများကိုနိမ့်ကျစွာဖော်ပြခဲ့သည်
Netflix ရဲ့ Avatar အကြောင်းသိရတာက The Last Airbender Live-action series
Avatar: နောက်ဆုံးလေယာဉ်ပျံ Netflix တွင် ၂၀၂၀ မေလတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ပြီးစီးရီးသည်အသက် ၁၅ နှစ်ကျော်နေစဉ်၊ Avatar: နောက်ဆုံးလေယာဉ်ပျံ Netflix တွင်လူကြိုက်အများဆုံးပြပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ စီးရီးကို Netflix ကပေါင်းထည့်ပြီးကတည်းကကျနော်တို့ Netflix ရဲ့ထိပ်တန်း 10 နေ့စဉ်အဆင့်ကျော်ပြပွဲမြင်ကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် Netflix က live-action လုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုပရိသတ်တွေကိုသတိပေးဖို့အချိန်လိုတာပေါ့ Avatar: နောက်ဆုံးလေယာဉ်ပျံ၊ ထိုသို့မကြာမီ streaming များဝန်ဆောင်မှုလာမယ့်!
နှင့်အဘယ်သူမျှမ, ဒီစီးရီးအမ်ညည Shyamalan ရုပ်ရှင်နှင့်မဆိုင်ပါဘူး။
အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Netflix ၏သိသမျှကိုမျှဝေခဲ့သည် Avatar: နောက်ဆုံးလေယာဉ်ပျံ လွှတ်ပေးသည့်ရက်စွဲ, သွန်း, နောက်တွဲယာဉ်နှင့်ပိုပြီး။
Avatar: Netflix တွင်နောက်ဆုံးဖြစ်သော Airbender ထုတ်ပြန်သည့်နေ့
Netflix ကကြေငြာမထားပါဘူး Avatar: နောက်ဆုံးလေယာဉ်ပျံ လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲမရှိသေးသောကြောင့်စီးရီးမှာမကြာမီတွင် Netflix သို့မလာတော့ပါ။
အသေကောင်လမ်းလျှောက်ရာသီအသစ်သည် netflix တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်ရောက်လိမ့်မည်နည်း
အမှုအရာရပ်အဖြစ် Netflix ကမူရင်းစီးရီးသေးထုတ်လုပ်မှုစတင်ခဲ့တူသောကြောင့်မထင်ထားဘူး။ သူတို့ဟာရာသီမှာအလုပ်လုပ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုတော့ငါတို့သိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ရိုက်ကူးမှုစတင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားဝင်မွမ်းမံချက်တွေကိုငါတို့မတွေ့ရဘူး။ ဒါကရာသီအကြောင်းပြချက်အနည်းငယ်များအတွက်အတော်လေးရှည်လျားသောဝေးဝေးဆိုလိုသည်။
ပထမ ဦး စွာဤကဲ့သို့သောပြပွဲတွင်ထုတ်လုပ်မှုသည်အတော်အတန်ကြာရှည်လိမ့်မည်။ ဂရုစိုက်ရန်လုပ်ဆောင်ရန်အစီအစဉ်များ၊ တန့်များနှင့် CGI များစွာရှိသည်၊ ထိုအရာများအားလုံးသည်အချိန်များစွာယူရသည်။
ထိုထုတ်လုပ်မှုစိန်ခေါ်မှုများနှင့်အတူ coronavirus ကူးစက်ရောဂါသည်ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိတီဗွီနှင့်ရုပ်ရှင်စက်ရုံများမှထုတ်လုပ်မှုကိုရပ်ဆိုင်းထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအခြေအနေသည်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်မည်ကိုမသိပါ Avatar: နောက်ဆုံးလေယာဉ်ပျံ လွှတ်ပေးသည့်နေ့စွဲ, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကသူတို့ပြီးသားရှိသည်မဟုတ်ပါလျှင်သူကလိုင်းတလျှောက်တွင်အရာတို့ကိုနှောင့်နှေးလိမ့်မည်ဟုစိတ်ကူးဖို့ရှိသည်။
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များအရ ၂၀၂၁ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းဖြန့်ချိမည့်နေ့သည်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ထားသကဲ့သို့စောလွန်းလိမ့်မည် Avatar: နောက်ဆုံးလေယာဉ်ပျံ၊ ကြောင်းဖြစ်ကောင်းအနည်းငယ်လွန်းအကောင်းမြင်ဖြစ်ခြင်းပါပဲ။ ပိုများသောငါတို့သည်မြင်ပါလိမ့်မယ် Avatar: နောက်ဆုံးလေယာဉ်ပျံ 2022 ခုနှစ်တွင်အချို့သောအချိန်များအတွက်စီစဉ်ထားဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ။
ထပ်မံ၍ coronavirus ကူးစက်ရောဂါသည်တစ်နှစ်လုံးကုန်ထုတ်လုပ်မှုကိုဆက်လက်ရပ်တန့်နေပါကသို့မဟုတ်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှနှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုများရှိပါက၎င်းသည်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
Avatar: The Last Airbender သရုပ်ဆောင်သည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Netflix ကိုကြေငြာခြင်းကိုမတွေ့ရပါ Avatar: နောက်ဆုံးလေယာဉ်ပျံ သေးချပစ်။ streaming ကွန်ယက်သည်မည်သည့်အချိန်တွင်သရုပ်ပြမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိရှိရသေးပါ။ သို့သော် အကယ်၍ ထုတ်လုပ်မှုကိုယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်စတင်ရန်စီစဉ်ထားပါကမဝေးတော့သောအနာဂတ်တွင်သရုပ်ဖော်မှုကိုရှာဖွေသင့်သည်။
Stay ဟာ Netflix ရဲ့မူလစီးရီးတွေအကြောင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်မယ့်သတင်းကိုစောင့်ကြည့်နေပါ။
Michael Dante DiMartino နှင့် Bryan Konietzko တို့သည် Netflix ၏ showrunners နှင့်ထုတ်လုပ်သူများအဖြစ်ပြန်လာခဲ့ကြသည် Avatar: နောက်ဆုံးလေယာဉ်ပျံ
Avatar: နောက်ဆုံး Airbender နောက်တွဲယာဉ်
ကျနော်တို့စီးရီးအသစ်များအတွက်နောက်တွဲယာဉ်ကိုမြင်ကြပြီမဟုတ်။ တကယ်တော့၊ စီးရီးကိုကြေညာပြီးကတည်းက Netflix ၏တရားဝင်အကောင့်များမှကျွန်ုပ်တို့တစ်စုံတစ်ခုမျှမတွေ့ရပါ။
ကျနော်တို့အောက်မှာကြောင်း tweet နှင့်ပုံရိပ် shared!
Reimagined live-action Avatar: The Last Airbender စီးရီးသည် Netflix သို့လာသည်!
- နောက်လာမည့်အရာ (@seewhatsnext) တွင်ကြည့်ပါ။ စက်တင်ဘာ 18, 2018
Avatar: The Last Airbender အကျဉ်းချုပ်
ကျနော်တို့နေဆဲ Netflix ကမူရင်းစီးရီးများအတွက်အနှစ်ချုပ်မြင်ကြပြီမဟုတ်! ကျနော်တို့မကြာမီစီးရီးအနှစ်ချုပ်ထုတ်ဖော်ပြသအဖြစ်အကျဉ်းချုပ်ဝေမျှပါလိမ့်မယ်!
ဒါကကျနော်တို့သည်အထိငါတို့သိအားလုံးအကြောင်းပါပဲ Avatar: နောက်ဆုံးလေယာဉ်ပျံ ဤအချက်မှာ။ ငါတို့သည်သင်တို့အဖြစ်မကြာမီငါတို့ထွက်ရှာတွေ့သကဲ့သို့သင်တို့ကိုပိုမိုသိစေပါလိမ့်မယ်!
mindhunter ရာသီ 1 ဇာတ်လမ်းတွဲ 1 recap
တစ် ဦး ပျက်ကွက်နိုက် s2 ၏ chivalry
grey ရဲ့ခန္ဓာဗေဒရာသီ 15 အပိုင်း ၉ နာရီအွန်လိုင်းကိုအခမဲ့
အပျိုကညာမြစ်စီးရီး netflix အပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်